Pool Design - Nnukwu Ọdọ
Igwu Uwe Mmiri Osisi Igwu
Ihe mere ị ga-eji see ebe a na-egwu mmiri
Iwu igwu mmiri igwu mmiri dị ezigbo mkpa maka iwu ụlọ ebe a na-egwu mmiri, ọ pụkwara ịsị na ọ dị oke mkpa.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị ọrụ ngo izugbe ma ọ bụ ndị na-ewu ụlọ na-enye ndị ahịa ha atụmatụ ọdọ mmiri. Yabụ, iwu ọdọ mmiri ahụ nwere ike ịme naanị onye na-eme ya. N'ụzọ dị otu a, ịnweghị ike ịnwe ọtụtụ nhọrọ n'ihe gbasara ụzọ e si ewu ụlọ, akụrụngwa yana akụrụngwa. Ga-akwụ ụgwọ maka ọdọ mmiri mwube mmefu ego na onye ọrụ ngo ụgwọ.
Agbanyeghị, na GREATPOOL ị nwere ike ijikwa mmefu ego nke ọdọ mmiri gị site na eserese anyị meere gị. N'ezie, nke a chọrọ ka ị wepụta oge iji kparịta ụka, mana anyị nwere ike ijide gị na ọ bara uru.
Nọgidenụ na-agụ ma anyị ga-akọwara gị otu esi esonye na ihe ị ga-enweta na ya.
Nke mbu, anyi gha enye gi ihe osise zuru ezu maka itinye oru ngo a. Na-echegbu onwe gị maka ịghara ịghọta eserese anyị. Nhazi ha dị mfe nghọta, ọbụlagodi maka ndị na-ewu ebe a na-egwu mmiri.
Nke abuo, anyi n'enye ndi mmadu ihe ndi ozo nke a na-etinye n'ime ọdọ mmiri na ime ụlọ mgbapụta.
Nke atọ, dum na-ewu na echichi oru nkwado. Na-atụ egwu enweghị nkà iji wuo ebe igwu mmiri. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-anọnyere gị n'oge ọrụ iji nye gị nkwado teknụzụ.
Na nkenke, ozugbo isonye na ọrụ imepụta GREATPOOL, ị ga-enwe ike ịghọta etu ebe igwu mmiri gị si arụ ọrụ; ihe osise hydraulic na-egosi n'ụzọ doro anya ọnọdụ nke ọkpọkọ ahụ, a kpọkwara valves na akụrụngwa niile n'ime ụlọ mgbapụta ahụ
Ihe osise igwu mmiri igwu mmiri gụnyere
Ọnọdụ nke oru ngo gị: Anyị ga-egosi gị kpọmkwem ọnọdụ nke ebe igwu mmiri ahụ dabere na map topographic.
Nhazi nke ebe igwu mmiri
Ekele maka eserese a, ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ nhazi nke ọma. Egosipụta ụkpụrụ niile tụrụ iji zere njehie. Akụkụ a na-egosi n'ụzọ doro anya omimi dị omimi nke mmiri na steepụ na-eduga na ọdọ mmiri.
A na-edepụta ihe ndozi nke ọdọ mmiri na ọwa mmiri; na-emekarị, anyị ga-itinye ihe ọmụma zuru ezu ka ndị ọrụ nwee ike ịghọta nke ọma.
Ahụmahụ anyị na-egosi na iji agba agba na-eme ka ihe osise ahụ nwee ike ịgụta; nke a bụ eziokwu karịsịa maka ebighebi ọdọ mmiri.
Na nkenke, ihe niile anyi dere dị oke mkpa iji mepụta eserese ebe igwu mmiri gị.
Site na ọdọ mmiri ruo n'ọnụ ụlọ akụrụngwa
Na atụmatụ dum nke ọdọ mmiri ahụ, anyị dọtara nhazi piping dị iche iche na-ejikọ ngwa ngwa ọdọ mmiri na ụlọ akụrụngwa.
Maka udo nke nghọta, anyị ejirila agba dị iche iche wee dezie ọnọdụ nke ngwa ọ bụla nke ọma; enweghi nsogbu nke njehie.
Iji kwado ọrụ ndị ọkpọ mmiri, anyị ji ezi uche hazie ọkpọkọ niile na-ahapụ ebe igwu mmiri.
N'ikpeazụ, nhazi piping a nwere ike ime ka ị mara ọnọdụ nke ọkpọkọ ọ bụla; nke a nwere ike ịba uru otu ụbọchị.
N'ime obi nzacha
Mgbe ụfọdụ, ndị ọkachamara na-ahụ maka ọdọ mmiri na-eleghara ụlọ akụrụngwa anya n'ihi na ọ bụ ihe a na-adịghị ahụ anya; Otú ọ dị, nke a bụ isi nke nwụnye gị. Ekele ya, mmiri ọdọ mmiri gị ga-adị ọcha ma mesoo ya nke ọma. Na ọdọ mmiri na-enweghị njedebe, a ga-arụnye ngwaọrụ nchekwa.
Ihe ntinye echichi nke e mere dika oke nke ime ụlọ ahụ na-egosi ọkpọkọ niile, valvụ dị mkpa na akụrụngwa n'ime ụlọ mgbapụta ahụ. A na-enye valves ndị dị mkpa ma gosipụta ọnọdụ ha nke ọma. Onye ọkpọ ọkpọ chọrọ naanị ịgbaso atụmatụ ahụ.
Dị ka onye nwe ebe igwu mmiri, atụmatụ a na-enye gị ohere ijikwa sistemụ nzacha nke ọma.
Nzọụkwụ iji nweta atụmatụ ọdọ mmiri
Kpaa nkata otu mgbe, zigachaa dọkụmentị, dị ka atụmatụ ibé, foto gburugburu ebe obibi, na nlele ọdọ mmiri ga-eme n'ọdịnihu.
Realisation nke atụmatụ echiche
Anyị ga-atụle ihe ị chọrọ na nrọ ka ị mata iji gosipụta ọrụ nke dabara adaba maka ala gị na gburugburu ya. Atụmatụ echiche a bụ mmalite maka eserese niile, anyị ga-eji oge niile soro gị kwurịta ya.
3. Ihe osise
You ga-enweta, na usoro PDF dijitalụ, eserese ọdọ mmiri niile nwere ike iwulite ma ọ bụ mee ka ọdọ mmiri gị nwee udo nke uche zuru oke. Anyị na-agbakwunye ọtụtụ ihe nzacha (akụkụ ka akàrà, akụrụngwa, ...)
4.Mgbe eserese ebe igwu mmiri
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, anyị ga-enye ụdị nkwado dị iche iche. Nwere ike ịmụ banyere ọrụ ndị a Ebe a.
Ajụjụ banyere eserese ebe igwu mmiri
Kedu mba ị na-arụ ọrụ?
Anyị na-arụ ọrụ n'ịntanetị ma ọ dịghị mkpa ka ị gaa njem iji nyere gị aka. Yabụ, anyị na-arụ ọrụ n'ụwa niile.
Kedu ihe kpatara ịchọrọ iji chọọ enyemaka nke nnukwu ọdọ mmiri?
Anyị na-ekerịta ahụmịhe anyị na ndị ahịa anyị, jikọtara ya na akụrụngwa kachasị elu na teknụzụ na ụlọ ọrụ igwu mmiri. Nke a bụ afọ 25 anyị nwere ahụmahụ na ụlọ ọrụ igwu mmiri. Na mgbakwunye, usoro mmemme anyị na-enye nwere ike ime ka ndị ọrụ n'ụwa niile ghọta ya ma mejuputa ya ozugbo. Anyị kwenyere na ị ga-enwe ekele maka azịza anyị.
M ga-enwe ike ịrịọ ruturu na eserese gị?
N'ezie ! Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ na ị na-elekọta ọrụ igwu mmiri gị. Site na eserese anyị na ọtụtụ akụrụngwa, onye ọ bụla mason na plumber nwere ike ịnye gị ọnụego. N'ezie, anyị na-adụ gị ọdụ ịrịọ arịrịọ sitere n'aka ọtụtụ ndị omenkà ka ị nwee ike iji ya tụnyere. Younwekwara ike ịzụrụ akụrụngwa ahụ n'onwe gị.
M nwetara a ụkpụrụ ụlọ atụmatụ; gini ka i g youji wetaram?
Atụmatụ ndị onye na-ese ụkpụrụ ụlọ nyere na-abụkarị atụmatụ iwu mason; ha mgbe ụfọdụ nwere ihe ọmụma zuru ezu kpọmkwem na ọdọ mmiri tojupụtara, mana pere mpe. Tụkwasị na nke ahụ, egosighi ntinye nke ọkpọkọ, akwa akwa na nzacha. Zitere anyị atụmatụ gị, anyị ga-agwa gị otu anyị nwere ike isi nyere gị aka.
Igha mmiri nke Ọha, Igwu Pool Ngwọta, Igwu Ulo Okpu, Ọrụ Igba mmiri, Igwu Mmiri Pool, Rooftop Pool Ngwa,